Vapor Breeze Svutugadziriso Yetii - Dhizaini magazini
Svutugadziriso Yetii Tea poto iri bhokisi rine zvakasikwa zvakasikwa rakamirira kuburitswa. Ukatarisa mukati mekuvhura iwe unogona kuwana chimiro chemasimba chiteshi icho chiri pakati nepakati pane hove. Icho chimiro chinoratidzirwawo paganda kunze. Muviri wese unoenzanisira vaporized chinhu kuti vanhu vaone uye vanakirwe zuva rega rega.
Zita rechirongwa : Vapor Breeze, Vagadziri zita : Naai-Jung Shih, Izita remutengi : Naai-Jung Shih.
Kugadzira, algorithmic uye parametric dhizaini
Svutugadziriso Yetii Naai-Jung Shih Vapor Breeze